By သဇင်လှိုင် 12 January 2018
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဖြူးမြို့အနောက်တောင်ဘက်ကို ဗဟိုပြုပြီး လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် အင်အား ရစ်ချ်တာ စကေး ၆ ရှိ ငလျင်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိကြောင်း ဖြူးမြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာနက ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
ယနေ့နံနက် ၁၂နာရီ ၅၆မိနစ်က မြေအောက်အနက် ၁၀ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပြုကာ အင်အား ရစ်ချ်တာ စကေး ၆ ရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်များအဖြစ် နံနက် ၁နာရီ ၈မိနစ်၊ ၁၂မိနစ်၊ ၁၄ မိနစ်တို့ တွင် အင်အား ၅.၃ အဆင့်ရှိ ငလျင် ၃ကြိမ်၊ ၂ နာရီ ၉ မိနစ်တွင် အင်အား ၄. ၇ ရှိ ငလျင်တကြိမ်၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၆ မိနစ်တွင် ၄. ၆ ရှိ ၂ ကြိမ် ထပ်မံ လှုပ်ခတ်ခဲ့ ကြောင်း မိုးဇလ ဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဖြူးမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဇော်ဦးက “ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိပါဘူး။ ဖြူးမြို့ရဲ့ အနောက်တောင် ဘက် ၁၇မိုင်အကွာကို ဗဟို ချက်ဆိုတော့ ညပိုင်းက နည်းနည်းစိုးရိမ်ကြတယ်။ ဖြူးချောင်းကို ချက်ချင်းညတွင်း ချင်း စစ်ဆေးကြတယ်။ ဖြူးချောင်းနဲ့ ကွန်းချောင်း တမံ ၂ခုလုံး အားလုံးစစ်ဆေးပြီးပါပြီ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ငလျင်များ လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ဗဟိုချက် အနီးတွင် ကွန်းချောင်း ဆည်၊ ဖြူးချောင်းဆည်တို့ တည်ရှိနေသော်လည်း ထိခိုက်မှု တစ်စုံတရာ မရှိကြောင်း ဖြူးမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး အမှတ် ၁ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသက်စိန် ကလည်း ဆိုသည်။
“ဒီမနက်ကို ထွေအုပ်က တရားဝင်တင်လာတာကတော့ အကုန်လုံးအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ ကွန်းချောင်းဆည် ၊ ဖြူးချောင်းဆည်လည်း အကုန်လုံးစစ်ဆေးပြီးပါပြီ အားလုံးက အိုကေပါပဲ။ အပျက်အစီးချို့ယွင်းချက်မရှိပါဘူး။ ဆည်မြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေလည်း စစ်ဆေးပြီးပါပြီ”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ကွန်းချောင်းရေလှောင်တမံသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နေသည့် စီမံကိန်းတခုဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မြေငလျင်ကော်မတီ မှ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးသန့်က အနောက်ပဲခူးရိုးမ တွန်းတင် ပြတ်ရွေ့မှ လှုပ်ခတ်ခြင်းဟုယူဆပြီး အဆိုပါ ငလျင်ကြော တလျောက်ရှိ ဒေသများ လည်း ခံစားရ နိုင်ကြောင်း၊ ဇောက်တိမ် ငလျင် အမျိုးအစား ဖြစ်သဖြင့် နောက်ဆက်တွဲငလျင်များ လှုပ်နိုင်ခြေရှိ သေးကြောင်း ပြောသည်။
“နောက်ဆက်တွဲငလျင်က လှုပ်ဖို့ရာ အခွင့်အလမ်းများတယ်။ လှုပ်ကောင်းလှုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်းအား ကလည်း ၆ လောက်ရှိတယ်။ Focal Depth ကလည်း 10 Kilometer လောက်ဆိုတော့ After Shock ကတော့ လာမှာပဲ ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
နောက်ဆက်တွဲငလျင်များ လှုပ်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ကြိုတင်လေ့ကျင့် လျက် ရှိပြီး ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုလည်း သတိပေးထားကြောင်း ဖြူးမြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ယင်းငလျင်ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ် တို့ရှိ မြို့များတွင်ပါ လှုပ်ခတ်မှုကို ခံစားခဲ့ရသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လကလည်း ရန်ကုန်တိုင်း တိုက်ကြီးမြို့ အနောက်တောင်ဘက် ၅ မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြုကာ အင်အား ၅.၈ ရစ်ချ်တာစကေးရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရာ လူ ၂၀ဦးခန့် အနည်းငယ် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး၊ အပျက်အစီး အနည်းငယ် ရှိခဲ့သည်။
၁၉၃၀ ခုနှစ် ပဲခူးမြို့ကို ဗဟိုပြု လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင်သည် အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီး အင်အား ရစ်ချ်တာစကေး ပြင်းအား ၇ ဒသမ ၃ အထိ လှုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီး ၎င်းနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင်ပင် ဖြူးမြို့နယ် တွင် ထပ်မံ လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။
Topics: ဖြူး ငလျင်